အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး-၁ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on April 16, 2013 at 19:02 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုက်စားလာတာကြာပေမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်လေမှာတစ်ချို့ ကိစ္စလေးတွေဟာ သို့လောသို့လောနှင့် စိတ်ရှုတ်ထွေးစရာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စာလုံးပေါင်းကိစ္စ၊ comma လား period လား၊ above သုံးရမလား၊ over သုံးရမလား၊ စသည့်အသေးအဖွဲ လေးတွေမှ အစ ရေးထုံး၊ past tense နဲ့ရေးမှာလား၊ present perfect နဲ့လား၊ adverbs တွေရဲ့ position in sentence ၀ါကျတွင်းအထားအသိုကဲ့သို့ သဒ္ဒါအသုံးအနှုန်းဆိုင်ရာ တွေကို မိခင်ဘာသာပြောဆိုသူမဟုတ်သူတွေ၊ ကျောင်းသင်ခန်းစာ learning the rules ပုံစံမျိုးနဲ့လေ့လာခဲ့သူတို့အတွက်မှန်ရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
အပြောတွင်မသိသာပေမယ့် နှုတ်တစ်ရာစာတစ်လုံးဆိုသလို အရေးအသား ကိစ္စတွေမှာကျတော့ မှားလျှင်သိသာတတ်သဖြင့် မိခင်ဘာသာဖြင့် ရေးသားလျှင်တောင် ရည်ညွှန်းစာအုပ်တွေကို ကိုးကားရလေ့ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားဘာသာဆိုလျှင်တော့ ဆိုဖွယ်ရာမရှိပေ။ ၄င်းရည်ညွှန်းစာအုပ်တွေထဲတွင် မိမိကိုယ်တိုင် မကြာခဏပြန်ကိုးကား ရသည့်စာအုပ်ကောင်းလေးတစ်အုပ်က Michael Swan ပြုစုသည့် Basic English Usage ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာကျောင်းသားတို့အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် မြန်မာလိုရှင်းလင်းချက်ဖြင့် ပြန်လည်တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးများသည် intermediate အဆင့်ရှိကျောင်းသားများအတွက်ဖြစ်သော်လည်း အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူအားလုံး အတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ မူရင်းစာရေးသူက standard modern British English ဖြင့်ပြုစုထားသည်ဟုဆိုပါသည်။
(မိမိရှေ့ ဆရာ့ဆရာများ ပုံနှိပ်စာအုပ်အဖြစ် ရေးသားခဲ့ကြပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမယ့် အင်တာနက်ခေတ်မှာ အလွယ်တကူ ကိုးကားနိုင်မည့် electronic reference ပုံစံများလေ၊ လေ့လာသူတို့အတွက်အကျိုးရှိလေဟုသဘောပိုက်ပါသည်။ဤဆောင်းပါးများအတွင်းမှ ချွတ်ချော်မှားယွင်းမှုများရှိပါက မိမိ၏နားလည်သဘောပေါက်မှု၊ လေ့လာမှု အားနည်းချက် သာဖြစ်ပါသည်။)
1 abbreviations အတိုကောက်စကာလုံးများ
၁။ အတိုကောက်စာလုံးများကို British English တွင် full stops (.) မပါဘဲသုံးသည်။
Mr (NOT Mr.) = Mister
Ltd = limited (company)
the BBC = the British Broadcasting Corporation
OPEC = the Organization of Petroleum Exporting Countries
၂။ တစ်ချို့အတိုကောက်များဟာ စကားလုံးများ၏အစအက္ခရာများကိုစုစည်းထားတာ မျိုးဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ကို အသံထွက်ရာ၌ တစ်လုံးချင်းစီကိုထွက်၍ ဖိသံ (stress) ကို နောက်ဆုံးအက္ခရာတွင်ဖိ၍ရွတ်လေ့ရှိသည်။
the BBC / ðəbi:bi:’si:/ ဘီဘီစီး the USA / ðəju:es’ew/ ယူအက်စ်အေး
တစ်ချို့အတိုကောက်များအား အက္ခရာတစ်လုံးချင်းအသံမထွက်ဘဲ စုပေါင်း၍စကားလုံးတစ်လုံးကဲ့သို့ထွက်လေ့ရှိသည်။ထိုအခါ the ကိုသုံးလေ့မရှိပါ။
NATO /’newtə/ နေးတိုး
OPEC / ‘əpek/အိုးပက်
2 about to တော့မလို့
be + about + to-infinitive
အခုလေးတင်လုပ်တော့မယ်၊ တစ်ခုခုကို လုပ်တော့မလို့ ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သုံးသည်။
Don’t go out now—we’re about to have supper.
အခုအပြင်မထွက်နဲ့။ တို့ခဏနေ ညနက်စာစားကြတော့မလို့။
3 above နှင့် over အထက်တွင်၊ အပေါ်က၊ အပေါ်မှာ
၁။ above နှင့် over နှစ်ခုစလုံးသည် “ပို၍မြင့်သောနေရာမှာ” အပေါ်မှာ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။
A is above/over B.
The snow came up above/over our knees.
There’saspider on the ceiling just above/over your head.
၂။ above အား အရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် တခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခု၏အပေါ်တည့်တည့်တွင်ရှိ မနေသည့်အခါသုံးသည်။
A is above B. (NOT A is over B)
၃။ over ကိုတစ်ခုက အခြားတစ်ခုကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ဖုံးလွှမ်းထားသည် ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် သုံးသည်။
A is over B.
A is (moving) over/across B.
Electricity cables stretch over/across the fields.
The plane was flying over/across the Channel.
၄။ over ကို အတိုင်းအတာ ပမာဏတစ်ခုထက်အနည်းငယ်ပိုသည်ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်နှင့် သုံးသည်။
‘How old are you?’ ‘Over thirty. ’
He 's over two metres tall.
သူ့အရပ် ၂ မီတာကျော်မြင့်တယ်။
There were over fifty people at the party.
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဒေါင်လိုက်ပမာဏ အတိုင်းအတာများအကြောင်းပြောသည့် အသုံးအနှုန်းများတွင် above ကိုသုံးသည်။
above zero (အပူချိန်သုညဒီဂရီအထက်);
above average. (ပျမ်းမျှအထက်)
4 across and over မျက်နှာချင်းဆိုင်။ တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့
၁။ across နှင့် over နှစ်ခုစလုံးကို “အခြားတစ်ဖက်တွင်”၊ “ဟိုဖက်ခြမ်း” ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်နှင့်သုံးသည်။
His house is just over/across the road.
သူ့အိမ်သည် လမ်း၏တစ်ဖက်ခြမ်းတွင် ရှိသည်။
Try to jump over/across the stream.
၂။ မြင့်သောအတားအဆီးတစ်ခုအားကျော်လွှားသည်။ မြင့်သောအရာဝတ္ထု၏ တစ်ဖက်သို့ ရွေ့လျားမှု စသည်တို့ကိုပြောရာတွင် over ကိုပို၍အသုံးများသည်။
Why is that woman climbing over the wall?
(NOT . . . climbing across the wal? )
၃။ ဖြတ်ကူးသည်။ ပြင်ညီအရာဝတ္ထု၏တစ်ဖက်မှ တစ်ခြားတစ်ဖက်သို့ရွေ့လျားမှု စသည်တို့ကိုပြောရာတွင် across ကိုပို၍အသုံးများသည်။
It took him six weeks to walk across the desert.
(NOT . . . to walk over the desert.)
5 across and through ကျော်၍၊ ဖြတ်၍ (သွားသည်၊ ဝင်သည်၊ စီးသည်၊ ဖြာသည် စသည်)။
၁။ across နှင့် through တို့၏ကွာခြားမှုသည် on နှင့် in တို့၏ကွာခြားမှုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
across အား မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်ရွေ့လျားမှုနှင့် သုံးသည်။ through အား အလျားအနံအမြင့် ထုသုံးဖက်ရှိအရာဝတ္ထုတစ်ခုအတွင်းဖြတ်သန်းရွေ့လျားမှုနှင့် သုံးသည်။
We walked across the ice. We drove across the desert.
ကျွန်ုပ်တို့ရေခဲပြင်ပေါ်ဖြတ်လျောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သဲကန္တာရကိုဖြတ်မောင်းခဲ့ကြသည်။
I walked through the wood. We drove through several towns.
ကျွန်တော်တောအုပ်ထဲကဖြတ်လျှောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ မြို့များကိုဖြတ်မောင်းခဲ့ကြသည်။
I walked across the square to the cafe .
I walked through the crowd to the bar.
၂။ People swim, and ships move, across rivers, lakes etc.
လူများက မြစ်/ကန် စသည်တို့ကို ဖြတ်ကူးသည်။ swim across
လှေသင်္ဘောများက မြစ်/ကန် စသည်တို့ကို ဖြတ်သွားသည်။ move across
The river’s too wide to swim across.
Permalink Reply by meemaythu on April 17, 2013 at 18:27
Permalink Reply by Kay Khaing Oo on April 17, 2013 at 19:21
Permalink Reply by hsumyatthwe on April 18, 2013 at 12:30
Permalink Reply by Thar Htoo Zaw on April 18, 2013 at 16:55
အရမ်းကို အကျိုးရှိပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ
Permalink Reply by Khine Zin Zin Wai on April 21, 2013 at 15:07
Permalink Reply by Myint Myint Mon on April 21, 2013 at 16:42
Permalink Reply by sikedeveechan on April 22, 2013 at 16:56